केन्याको साम्बुरु जाति एक परिचय (विश्वास दीप तिगेला/केन्याबाट) - [2006-11-25]
पूर्वी अफ्रिकी मुलुक केन्याको उत्तरी भाग साम्बुरु जिल्लाको आर्चरपोष्र्ट इलाकामा आदिमकाल देखि बसोबास गर्दै आएका केन्याका ४२ जनजातिहरु मध्येका एक साम्बुरु जाति हुन । यी जाति घुम्रिपरेको कपाल भएका काला र अग्ला हुन्छन् । उनीहरु आफ्नै मातृभाषा साम्बुरु, देशको सर्म्पर्क भाषा सुहेली र अग्रेजी भाषा पनि बोल्दछन् । परापूव कुनै धर्म नमान्ने यी जातिहरुमा गत आधा शताब्दिमा रोमन क्याथोलिक धर्मको � ूलो प्रभाव परेको छ भने नगण्य मात्रामा मुस्लिम धर्म मान्ने पनि छन् ।
झण्डै ४ लाख जनसंख्या रहेका यी जातिहरु राज्यबाट धेरै उपेक्षित छन् । समतल र भित्रि मधेश झै भू-भाग रहेको � ाँउमा बसोवास गर्ने यी जातिहरुको मुख्य पेशा गाईबस्तु, भेडाबाख्रा, उट र गधा पालन गर्नु हो भने परम्परा देखि नै सुँगुर चाहि पाल्दैनन् । उनीहरु काँचो दुध र जनावरको आलो रगत मिसाएर पिउछन् । यी जातिहरु केहीदिन पानी नपिइ पनि बस्न सक्छन् । प्रत्येक हप्ता � ाँउ र्सर्दै गाईबाख्रा चराउछन् । प्रायः परिवारको २, ३ सय गाईबाख्राहरु हुन्छन् । जसको धेरै गाईबस्तु हुन्छ त्यहि मान्छेलाई धनीमान्छे मानिन्छ । यी जातिको चलन अनुसार छोरी मान्छेले घर बनाउछन् र छोरा मान्छेले पशुपालन गर्ने र सुरक्षा प्रदान गर्ने काम गर्दछन् । केन्यामा पाइने जनावरहरु मध्ये जंगलमा बस्ने जंगली भैसी अथार्त अर्ना सबै भन्दा खतरनाक मानिन्छ । त्यसकारण केन्यामा भैसीलाई घरमा पाल्ने गर्दैनन् ।
यी जातिको मौलिक विशेषता मोरान हो । अर्थात यसलाई अंग्रेजीमा वारिएर पनि भनिन्छ । मोरानहरु जातिय सेना हुन । उमेर १४ बर्षदेखि माथिकाले जंगलमा गएर जंगली जनावर मार्ने तालिम गर्छन र उनीहरुको बहादुरीको आधारमा मोरानको मान्यता पाउछन् । यी जातिभित्र बुडापाकाहरुमा � ूलो अधिकार हुन्छ र उनीहरुलाई सम्मान पनि त्यतिनै गर्दछन् । मोरानहरुले गाँउको सामुहिक रुपमा सुरक्षा गर्छन । यी साम्बुरु जातिका मोरानहरु सधै मोरान पोषाक -ल्यासो) लगाउछन् र शिरमा प्वाखको श्रीपेज झै बनाएर लगाउछन् । यी जातिको मुख्य हतियार भाला र पातालो फलामले बनेको दुबैतीर धार भएको सिधा हतियार हुन्छ त्यसलाई लालिम भनिन्छ । लालिमलाई खुकुरी झै भिर्छन् । लामालामा भाला चलाएर सिंह, हात्ति, अर्ना जस्ता जंगली जनावरहरु मार्छन् । जतिवटा खतरनाक जंगली जनावर मार्‍यो त्यतिवटै गाइको छालाले बनेको चुरा लगाउछन् । विवाहित छोरीमान्छेले घाँटीमा धेरै माला लगाउछन् । छोरा जन्माएका स्वास्नीमानिसले शिरमा लगाउने गहनामा स्पष्ट संग चिनिने गहना लगाउछन् (चित्रमा हेर्नुहोस) । त्यस गहनालाई साय इन्क्वा भनिन्छ । छोरी मात्र जन्माएकाले उक्त गहना लगाउन पाउदैनन् । विवाह गरेका लोग्ने मान्छेले चाहि कानको माथिल्लो भागमा डोरीजस्तो देखिने गहना लगाउछन् । जब विवाह गर्छन तब उसलाई मोरान भनिन्दैन । मोरान अविवाहित केटाहरु मात्र हुन्छन् । गाँउमा चोरीडकैती, जंगली जनावरको आक्रमण भएमा मोरानहरु हिम्मतका साथ लड्छन र उनीहरु बलिया र मूर्ख पनि हुन्छन् ।
साम्बुरु जातिहरुको जीवनस्तर निक्कै निम्न छ । यी जातिले मर्साई, तर्ुकना जाति संग पनि कुटुम्बेरी गर्छन । साम्बुरु जाति साम्बुरु जिल्लामा मुख्य रुपमा बसोवास गर्छन । यी जातिको आफ्नै मौलिक केही नाचगानहरु पनि छन् । जस मध्य गेरियो नाच तरुनीतन्नेरीले हात समाएर नाच्ने नाच हो भने समुहमा नाचिने नाचलाई डेमर नाच भनिन्छ । साम्बुरु जातिका लोग्ने मान्छेले प्रायजसोले मिराक खान्छन् । मिराक एक प्रकारको लागु पदार्थ हो । यसले कोकिनले जस्तै मात दिन्छ । यो मिराक मेरु जातिले मात्र उत्पादन गर्दर्छ । यो मिराक खानाले ३ दिन ३ रात निन्द्रा नलाग्ने नसा लाग्दछ । चियाको बोटको काँचो टुप्पाको जस्तै स्वाद हुने यो मिराक इथोपिया, युगाण्डा, तान्जानिया, सोमालिया र सुडानमा पनि प्रचलनमा रहेको छ । यो मिराक खाने स्वास्नी मानिसको गर्भ नरहने, यौन क्षमतामा हृ्रास आउने जस्ता असर हुने भएकोले साम्बुरु संस्कृतिमा छोरी मान्छेले मिराक खादैनन् । उनीहरुको दैनिक खाना काँचो दुध, काँचो रगत मिसाएर खान्छन साथै वोडिको परिकार पनि मुख्य रुपमा खान्छन् । उनीहरु आफ्नै स्थानीय मादक पदार्थ वुसा र चाङा पिउछन् । वुसा बनाउने तरिका अलि फरक भए पनि यसलाई जाँड संग दाँज्न सकिन्छ । चाङा चाहि रक्सीको जस्तो स्वादको हुन्छ । यी जाति वासो निरो नदी अर्थात खैरो धमिलो पानीको नदी नजिक वसोबास गर्छन । सधै धमिलो पानी आउने यस नदीको छेवैको बलौटे बगरमा सानो खाल्डो बनाउछन् र रस्सिएर आउने पानी यहाँका निम्न वर्गकाले पिउछन् ।
यस जाति बसोवास गर्ने इलाकामा जिराफ, उट, जेब्राले खाने रुख विरुवाहरु पाइन्छ । ती रुख बिरुवाको अत्यन्त स-साना पात र पात भन्दा लामालामा काँडा मझौला आकारको रुख हुन्छ । यी जातिहरु खासै खेतीपाती गर्दैनन् । घुमन्ते गो� ाला गर्छन र आफ्नैपनमा रमाउछन् ।
साम्बुरु जातिहरुले विवाह गर्नको लागि केटीको घरमा ७ वटा गाईगोरु अनिवार्य र केही बाख्राहरु लैजानु पर्छ । विवाहमा गोरु मार्छन र सामुहिक रुपमा भोज गरेर खुसि मनाउछन् । हाल केन्यामा अत्यधिक एड्स फैलिएकाले विवाह अघि एच आई भि पोजेटिभ भएनभएको ३ पटक सम्म स्वास्थ्य परिक्षण गरिन्छ त्यस पछि मात्र विवाहको लागि सरकारले अनुमति प्रदान गर्दछ । साम्बुरु जातिको मृत्यू संस्कार पनि निक्कै रोचक छ । परिवारमा कसैको मृत्यू भएमा त्यो लासको कपाल खौरिन्छ र छोराछोरी श्रीमतिको पनि कपाल खौरिएर उप्रान्त सम्बन्ध समाप्त भएको मान्यता राख्दछन् । त्यसपछि लासलाई निश्चित � ाँउमा गाड्छन् ।
आफ्नै साम्बुरु भाषालाई माया गर्ने यी जातिको आफ्नै लिपी चाहि छैन र अंगे्रजी लिपीलाई नै प्रयोग गर्छन । साम्बुरु भाषामा बुबालाई पापा, आमालाई ययीयो, दुधलाई कुले, आगोलाई निकिमा र नमस्तेलाई सोवा भन्दछन् । आफ्नै संस्कार संस्कृतिमा रमाउने यी जातिको आफ्नै स्वाभिमान छ । विदा पाँउ । सोवा ।।
१२ नोभेम्बर ०६, जन्मदिनको अवसर ३० बाट ३१
१. प्रत्यक्ष भ्रमण अध्यायन
२. डेभिड लाकमेड
३. डेभिड लोकिया
४. गिरीगिरी प्राइमेरी स्कुल, आर्चरपोष्ट केन्या